Lokhu dish elula empeleni ethandwa kakhulu. Pea isobho kungenziwa ngezindlela eziningana. Uma ungeza izithako ezimbalwa, uthola isidlo flavorful nokwanelisayo. Indlela ukupheka ipea isobho, ukuthi wayengumuntu okumnandi futhi esihlwabusayo? Lapha, njengoba kunoma iyiphi enye isidlo, unamaqhinga lalo. Cabangela izindlela ezimbalwa salokhu isobho.
Asiqale nge recipe ukuthi akasebenzisi imikhiqizo inyama. Lona khetho elula, okuyinto kulabo sesikhundleni, noma musa kudle inyama. Oku-Cwilisa uphizi (isigamu ingilazi) emanzini abandayo mayelana 2 h. Lo mkhiqizo nzima ukupheka, ngakho ukuze kukhuliswe ukulungiselela olunye, kubalulekile ukuthatha emanzini. Okwamanje, ehlanzekile eyodwa onion asikiwe kube cubes ezincane, zisakazwa epanini, okuyinto osuke usushisa kakade nge inani elincane amafutha yemifino. Ukungeza nalokho izaqathe lisikiwe (1 x), isigaxana sikagalikhi, ochotshoziwe futhi. Asazi ethosiwe. Sithatha amazambane amathathu usike wabayisa cubes, ngaphambi ukuthi ahlanze uqweqwe.
Beka imbiza yamanzi phezu komlilo futhi lasakazekela uphizi wakhe. Ubilise imizuzu 20-23. Bese wengeza nalokho amazambane. Ngokusebenzisa imizuzu 10 ukubeka epanini okuphekiwe ethosiwe. Ngemva kwenye imizuzu emihlanu, kubalulekile ukwengeza eminye izinongo, usawoti kanye leaf bay. Khona-ke thatha ushizi kusetshenzwe futhi sinqume zibe cubes ezincane. Thina wayendlala ku kuso. Ngemuva kwemizuzu engu-10 i-GAT bay leaf kusukela pan bese uvala isobho. Uma isobho kuthululwe ubeke amapuleti, kubalulekile ukwengeza kuwo imifino oqoshiwe.
Kulesi iresiphi, ungafaka ubhekeni ngabhema. Kulokhu, amagremu 100 ubhekeni iyiphi ungeze ku pan esikhundleni ezitshalo.
Futhi manje amagama ambalwa mayelana nendlela ukupheka ipea isobho nge inkukhu. Ngokwemvelo, lokhu kusho isobho okumnandi ngaphezulu eyatholakala ku umhluzi ecebile. iyiphi inyama ingasetshenziswa ekuwulungiseleleni. Thatha inkukhu, ikhaya elingcono, futhi sizobe awuhlahlele. Ezinye zazo zisebenzisa ukupheka umhluzi. Uma upheka semali isobho ungathatha lonke inkukhu. Thina basakaze inyama emanzini abandayo bese usetha pan emlilweni. Uma uphizi kungukuthi pre-ofakwe, ungayilayisha ebhodweni kanye inkukhu. Kodwa uma cwilisa emanzini abandayo amahora amaningi mayelana 2, bese uyifaka kwi-pan ngemva kwemizuzu engu-30. Hlanza amazambane amabili, eyodwa onion isanqante efanayo. Amazambane uthathe cubes epanini bese wengeza ihora elilodwa ngemuva kokuqala ukupheka. Ezinye izindaba zika-imifino usike fake kakhulu futhi benza ethosiwe emafutheni zemifino. Kufake ebhodweni futhi uthumele amakhambi oqoshiwe kanye izinongo. Pheka kuze kwenziwe uphake.
Kodwa iresiphi enkulu kakhulu lokhu dish ipea isobho izimbambo ngabhema. Ngabhema ukunikeza isobho flavour esiyingqayizivele kanye ukunambitheka. Sizodinga 700 amagremu of yenkomo kanye 300 amagremu ngibhema ingulube izimbambo. Songa inyama epanini, sigcwale amanzi bese uthumela ku ubilise 1.5 amahora. Nakuba ukulungiselela imikhiqizo inyama, kungenzeka ukulungiselela imifino. Kuyadingeka ukuhlanza eyodwa onion, isanqante, futhi amazambane amathathu. Amazambane uthathe cubes yobukhulu aphakathi nendawo, kanye isanqante and anyanisi fake shinkuem. imifino Fried ukwenza, anezela amabili wezipuni of utamatisi unama. Sabalalisa uphizi epanini, futhi ngemva 20 imizuzu uthele amazambane. Ngemva eminye imizuzu eyi-10 e isobho ukusabalala ukuthosa. Ekupheleni sypem oqoshiwe imifino.
Ngaphambi ukupheka ipea isobho kungcono cwilisa peas emanzini ukunciphisa isikhathi sokupheka. Ungasebenzisa futhi ezihlukahlukene amadivaysi technical. Ngokwesibonelo, ukupheka ipea isobho multivarka. Okokuqala kufanele abeke kuwo inyama nemifino. Futhi ngemva kwemizuzu engu-20 engeza uphizi ngibhema in umhluzi wafaka imodi wokukucima amahora amabili.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukupheka ipea isobho ngezindlela ezahlukene, uyojabulisa nomndeni wakho dinner okumnandi.
Amnandi kokudla kwasemini ngeSonto wonke umndeni: amathiphu, zokupheka ngezithombe
Indlela ukususa ukunambitheka ababayo yamakhukhamba. Izizathu ikhukhamba ebabayo
Amathiphu ezilula ezimbalwa, lokho ukupheka isitshalo seqanda
Ukugunda utshani. Indlela kahle ukunakekela ukhaphethi eziphilayo
Isobho Greek "elinegazi" - isidlo othandwayo kuleli Greece
Kungani ithambekele Tower of Pisa? Ukuphakama iqophelo lohlangothi
I-Tattoo "i-Polynesia" - imidwebo kanye nemininingwane ethile yendlela yokubulawa
Ubuhle mesmerizing inyoka coral
Ukubamba for ekubambeni eyikati
I-biography ephelele ye-Karim Masimov